International News – Page 23 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
मोदीले देखाएको सपना र अमित शाहले समातेको खुकुरीको परिणाम कहिले ?
प्रताप राई/दार्जिलिङ– गोर्खाहरुको दीर्घकालीन मागलाई सहानुभूति र गम्भीरतापूर्वक विचार गरिने भाजपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख कुरा पहाडको राजनीतिक खेमाभित्र चासो र चर्चाकै विषय बनेर अघि आउने गरेको छ । विगत २०१४ को लोकसभा चुनावमा भाजपालाई बहुमतले विजय गराएर पठाएपनि सोही बेला भाजपाले जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित कुरा पूर्ण हुने कुरामा पहाडको एक पक्ष आशावादी छ […]
Posted in: International News, mainNews, National News
बेलायतको नियन्त्रणमा रहेको हङकङ चीनले कसरी फिर्ता पायो र भविष्यमा के हुन्छ ?
बेलायतले हङकङको शासन चीनलाई हस्तान्तरण गरेको २० वर्ष एक साता पुगेको छ । विश्वमा यस्ता थुप्रै देशहरु छन्, जो इतिहासमा एउटाको अधिनमा रहेपनि पछि आएर स्वाधीन भएका र पुरानो भुगोलभित्र पुनः जोडिन पुगेका छन् । हङकङ पनि यस्तै क्षेत्र हो, जो चीनले पछि फिर्ता पाएको थियो । जस विषयमा हामीले केही जान्नैपर्ने निम्न कुराहरु छन् […]
Posted in: International News, फ्लयास ब्याक
गोर्खाल्याण्डको संवैधानिक माग बंगाल सरकारले दबाउँदै आएको छ : पवन चाम्लिङ
नाम्ची । सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले गोर्खाल्याण्डको माग संवैधानिक भएको भन्दै पहाडबासी जनताले उठाउँदै आएको मागलाई बंगाल सरकारले दबाउने गरेको बताएका छन् । उनले पश्चिम बंगालमा भइरहने यसप्रकारको आन्दोलनको मारमा सिक्किम समेत पर्ने गरेको भन्दै बंगाल सरकारप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री चाम्लिङले फेरि एक पटक गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई खुला रुपमा समर्थन जनाएका हुन् […]
जर्मनीमा जी–२० सम्मेलनअघि भएको झडपमा ७६ प्रहरी घाइते
एजेन्सी । जी–२० शिखर सम्मेलन सुरु हुनुअघि जर्मनीको ह्यामबर्ग शहरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपमा ७६ जना प्रहरी घाइते भएका छन् । झडपमा परी केही प्रदर्शनकारीसमेत घाइते भएका छन । घाइते प्रहरीहरुलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ । करिब १२ हजार प्रदर्शनकारीहरु ‘नर्कमा स्वागत छ’ नाम दिइएको प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए । त्यो प्रदर्शनमा […]
कुखुराले घन्टौंसम्म मुख्य सडकमा ट्राफिक जाम गरेपछि…
एजेन्सी । सवारी साधनको चाप र सही व्यवस्थापनको अभावमा ट्राफिक जाम भएको कुरा त तपाईले सुन्नु भएको होला । कुखुराका कारण सडक जाम भएको भने थाहा पाउनु भएको थिएन । तर पूर्वी अस्ट्रियामा कुखुराका कारण घन्टौसम्म ट्राफिक जाम भएको छ । कुखुरा लिएर जाँदै गरेको एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त भयो, जसका कारण देशको मुख्य राजमार्गमा घन्टौसम्म […]
भारतले गर्‍यो नेपालीभाषीबहुल आफ्नै देशको दार्जिलिङ र सिक्किममा नाकाबन्दी
दार्जिलिङ । भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको पहाडी क्षेत्र दार्जिलिङसहितको पहाडी क्षेत्रमा चलिरहेको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनका कारण त्यस क्षेत्रको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । आन्दोलनका क्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासहितका राजनीतिक दलको संयुक्त आव्हानमा करिब तीन सातादेखि त्यस क्षेत्रमा जारी आम हड्तालका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको हो । आम हड्तालका कारण खाद्यान्न, पेट्रोलिय पदार्थसहित दैनिक उपभोग्य वस्तुको […]
संसद भवनभित्रै छिरेर प्रदर्शनकारीद्वारा सांसदमाथि कुटपिट
एजेन्सी । भेनेजुएलामा विपक्षीको बहुमत रहेको नेशनल एसेम्बलीमा सरकारका समर्थक घुसेर आक्रमण गर्दा सांसद र पत्रकार घाइते भएका छन् । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार यो आक्रमण स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेशनल एसेम्बलीमा राखिएको बिशेष सत्रपछि भएको हो । समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार नेशनल एसेम्बलीको परिसरमा लाठीसहित घुसेर सो हमला गरेका थिए । भिडियो फुटेजमा दुई विपक्षी सांसदको अनुहारमा […]
उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र परीक्षणपछि अमेरिकाले भन्यो– ‘आवश्यक परेमा सैन्य शक्ति प्रयोग हुन्छ’
एजेन्सी । अमेरिकाले उत्तर कोरियाले ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेपछि त्यसको प्रतिरोध गर्नका लागि सैनिक शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्र संघका लागि अमेरिकी राजदूत निकी हेलीले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको बैठकका क्रममा कोरियाली प्रायद्वीपमा बढ्दो तनाव अत्यका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् । राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा उत्तर कोरियाको मिसाइल परीक्षणको कडा आलोचना समेत […]
उत्तर कोरियाको हमलाबाट बच्न सक्ला अमेरिका ?
उत्तर कोरियाको पछिल्लो ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको क्षमता र त्यसले मार हान्न सक्ने वास्तविक दूरी जतिसुकै भएपनि पारमाणविक अस्त्र बोक्न सक्ने क्षेप्यास्त्र विकास गर्ने आफ्नो उद्देश्यतर्फ बिस्तारै विस्तारै अघि बढिरहेकोमा कुनै सन्देह छैन । हालसम्म पनि हामीलाई खास रुपमा उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रम कहाँसम्म पुग्यो भन्ने थाहा छैन । तर ट्रम्प राष्ट्रपति भएको अवधिमा नै उसले यो […]